Wararka - Iftiinka Gudaha - Awood vs. Dhirta
Iftiinka Gudaha - Awood vs. Dhirta
Waa kuwan nalalka aad u baahan tahay si aad u hesho dhir tayo leh wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah:
Laydhka koritaanka rasaasta
Aad bay u fududahay in la rakibo, kuwa yaryarna waa fur oo ciyaar. Ka dib markaad ku dhejisid derbiga, waxaad ku dhejin kartaa dusha sare ee dhirta. Haddii aad rabto habayn fudud si aad u kordhiso wax-soo-saarkaaga dhirta, waa inaad iibsataa. In kasta oo ay kuleyl yar yihiin, waa inaad diyaarisaa marawaxad oo aad habayso socodka hawada iyo heerkulka aaggaaga koraya. Tani waxay xaqiijin doontaa dhalidda tayada sare leh ee dhirtaada.
Iftiinka koritaanka ee halide birtas marxaladda daaqsinka
Birta halides-ka korriinka nalka waa nooc ka mid ah isha iftiinka dheecaanka xoogga badan oo leh waxtar sare. Waxay la yimaadaan muuqaal isku dhafan oo leh daboolka muraayadaha iyo ballast dibadda ah. Waxay dhaliyaan kuleyl badan sidaas darteed waxay u baahan yihiin hawo habboon. Soodhiyamka cadaadiska sarreeya, nalalkani waxay soo saaraan wax soo saar wanaagsan halkii watt ee koronto iyada oo loo marayo iftiin kasta oo la heli karo. Natiijo ahaan, waxay si ballaaran u adeegsadaan beeralayda khibradda leh ee marxaladaha dambe ee horumarinta dhirta. Waxay leeyihiin spectrum buluug ah, taas oo aad muhiim ugu ah marxaladda trophic.
Cadaadiska sarreeya ee sodium wuxuu ku koraa iftiinka xilliga ubaxa
Si la mid ah nalalka halide biraha ah, nalalkani waa inay isticmaalaan daboolka muraayadaha iyo hawo-qaadista. Waxay wadaagaan sifooyin isku mid ah sida nalalka halide birta, si ay u isticmaalaan marxaladaha ubaxa iyo daaqsinka. Noocyada jaalaha ah ee ay soo saaraan nalalkani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta burooyinka waxayna sidoo kale lama huraan u tahay xilliga ubaxa.
Sawirka koritaanka fluorescent-clone dhirta dhallinta
Nalalka fluorescent ayaa muhiim u ah marxaladaha ugu horreeya ee nolosha dhirta. Waxay isticmaalaan koronto yar, waa raqiis, waxayna caan ku yihiin beeralayda hiwaayadda, taasoo ka dhigaysa inay si fudud u helaan. Wax soo saarka xirfadlaha ah, waxaad u baahan doontaa inaad haysato nalka koritaanka T5. Ilayska waxaa inta badan loo isticmaalaa beeridda, dhiraynta iyo abuuridda. Halka nalalka T5 ay ugu fiican yihiin dhirta yaryar, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho nalalka awooda sare leh sida halides birta ama HP marxaladaha dambe ee koritaanka dhirta.